Iinkcukacha ngokukhawuleza malunga ne-Element Hydrogen
I-Hydrogen yinto yeekhemikhali kunye nefayile yesakhi H kunye nenombolo ye-athomu 1. Kubalulekile kubo bonke ubomi kwaye baninzi kwindalo yonke, ngoko ke yinto enye enokuthi niyazi kakuhle. Nazi iinkalo ezisisiseko malunga neyokuqala kwitheyibhile, i-hydrogen.
Inomic Number : 1
I-Hydrogen yinto yokuqala etafileni yexesha , oku kuthetha ukuba inenani le- athomu le- 1 okanye i-proton nganye kwi-athomu nganye ye-hydrogen.
Igama lento livela kumaGrike amagama athi "amanzi" kunye namajethi "okwakhiwa," kuba izibophezelo ze-hydrogen kunye ne-oksijini ukwenza amanzi (H 2 O). URobert Boyle wakhiqiza igesi ye-hydrogen ngo-1671 ngexesha lokulinga ngesinyithi kunye ne-asidi, kodwa i-hydrogen ayibonakalwanga njengeyonto kuze kube ngu-1766 ngu-Henry Cavendish.
I-Atomic Weight : 1.00794
Oku kwenza i-hydrogen ibe yinto ebaluleke kakhulu. Kulula kakhulu, into ecocekileyo ayibophelelwe ngummandla wehlabathi. Ngoko, kukho igesi elincinci le-hydrogen elishiye emoyeni. Iiplanethi ezinkulu, ezifana neJupiter, ziquka i-hydrogen, njengeLanga kunye neenkwenkwezi. Nangona i-hydrogen, njengento ecocekileyo, izibophelelo ngokwazo ukwenza i-H 2 , isabhanya ngaphezu kwe-atom enye ye-heliyamu kuba amaninzi i-athomu ye-hydrogen ayinayo i-neutron. Enyanisweni, ii-athomu ezimbini ze-atrojeni (i-1.008 iinqununu zee-atomic units) nge-atom ubuninzi be-athomu ye-heliyamu (ubunzima be-athomu 4.003).
I-Hydrogen yinto ebalulekileyo kakhulu . Phantse i-90% yee-athomu kunye ne-75% yento ebuninzi bendalo i-hydrogen. Nangona i-hydrogen iyona nto ininzi kakhulu emzimbeni womntu ngokwemanani yee-atom zequmrhu, yinto yesithathu kuphela ngobuninzi, emva kwe-oxygen kunye nekhabhoni, kuba i-hydrogen ilula.
Kukho iisotophi ezintathu zemvelo ze -hydrogen: protium, deuterium , ne- tritium . I- isotope eqhelekileyo ye -hydrogen yiprotium, ene-1 proton, i- 0 neutron kunye ne-1 elektroni. Oku kwenza i-hydrogen yinto kuphela ekwazi ukuba nama-athomu ngaphandle kwe-neutron! I-Deuterium ine-proton eyi-1, i-neutron ne-1 ye-elektroni. Nangona le isotope inzima ngaphezu kweprotium, i-deuterium ayiyiyo i- radioactive. Nangona kunjalo, i-tritium ikhupha imitha. I-Tritium yi-isotope kunye neprotoni e-1, i-2 neutron kunye ne-1 ye-elektroni.
Igesi ye-Hydrogen iyatshisa kakhulu. It isetyenziswe njengotshisi yi-injini enkulu ye-intanethi kwaye idibene ne-explosion eyaziwayo ye-Hindenburg. Ngelixa abantu abaninzi bacinga ukuba i-oksijeni iyatshisa, ayiyi kutshisa . Nangona kunjalo, i-oxidizer, oko kutheni i-hydrogen ixhaphaza emoyeni okanye nge-oxygen.
Iimveliso ze-Hydrogen zibizwa ngokuba ngama-hydride.
I-Hydrogen ingaveliswa ngokusenza isinyithi nge-acids (umzekelo, i-zinc kunye ne-hydrochloric acid).
Ifomu le-hydrogen ekwindini lokushisa kunye nexinzelelo yerhasi engenabalabala kunye negalelo. Igesi kunye ne-liquid are nonmetals, kodwa xa i-hydrogen ixinyiweyo ibe yomelele, le nto iyinsimbi ye -alkali . I-hydrogen edibeneyo ene-metalgen ene-metalgen inexabiso elisezantsi kunazo zonke nayiphi na i-crystalline eqinile.
I-Hydrogen ininzi isebenzayo, nangona i-hydrogen ephezulu isetyenziselwa ukucubungula amafutha asefosil kunye nokuveliswa kwe-ammonia. Kufumana ukubaluleka njengombane osebenzayo ovelisa umbane ngokutsha, okufana noko kwenzekayo kwiimveliso zeoli. I-Hydrogen isetyenziselwa kwiiseli ze-fuel ezithatha i-hydrogen kunye ne-oksijini ukuvelisa amanzi nombane.
Kwiimveliso, i-hydrogen ingathatha inkokhelo engalunganga (H - ) okanye inkokhelo enhle (H + ).
I-Bonus Fact: I- hydrodro yodwa i-athomu apho i-equation yeSchödinger inechanelo ngqo.
Uphi i-Helium efunyenwe kwiTable Périodic?
Iinkcukacha zeCalcium - I-Ca okanye iNombolo ye-Atomic 20
Ziyolise i-Oxygen Facts for Kids
5 Iimfihlakalo zoFundo kwiAce zakho iimviwo
Amaphayona aPower-Pop: I-Grass Roots
Omnye Umzimba Omkhulu Wamasundu Ngosuku
Ukunyuka kweNtaba yeHlabathi: i-Kansas High Point
AbaFrentshi Bakubhiyozela Ukubonga? Akunjalo
I-CSULA GPA, iSAT kunye ne-ACT Data
'Jingle Bell Rock' Chords
Izilungiso (iMithetho Inkcazo kunye nolwazi olungaphezulu)
Izibambiso zesiTenzi zesiTaliyane: I-Nuotare
NgoFebruwari Ukubhala Kukhuthaza
Indlela yokudibana kunye nobuliso kwiNkcubeko yaseMoroccan
Indlela yokuguqula iGram kwiMoles
Iintlobo zeePlastiki zePaint
Ziziphi i-Mills "Power Elite" ezinokusifundisa malunga neNamuhla namhlanje